Otu esi eme nkwalite na Gnome 40 na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
Otu esi eme nkwalite gaa na Gnome 40 na Debian 11 Bullseye
November 3, 2021 August 16, 2021 by Jọshụa James
GNOME 41 NA DEBIAN 11
Kwalite gaa na Debian 11
Na-akwalite Gnome 40 na Debian 11
Kwado ebe nchekwa nnwale
Kwalite Gnome 40 & Ndabere
Otu esi emelite Gnome 40 n'ọdịnihu
ọtụtụ Debian 11 ndị ọrụ maara nke ahụ Gnome nke 38 bụ ụdị ndabara nke codename Bullseye sistemụ arụmọrụ. Agbanyeghị, ka ewurula ọtụtụ hype gburugburu desktọpụ Gnome 40 ọhụrụ, ọtụtụ ga-achọ ohere ịwụnye na nwalee ma ọ bụ jiri ihe kacha ọhụrụ na-enye Gnome kpamkpam.
Gnome 40 na-ewebata ọtụtụ mgbanwe site na mgbanwe a na-ahụ anya, ngwa ọhụrụ, na imegharị mgbanwe azụ azụ iji melite arụmọrụ. N'ozuzu, ọ dị nnọọ iche na nke nsụgharị Gnome gara aga leburu anya.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi etinye ihe ọhụrụ Desktọpụ Gnome na sistemụ arụmọrụ Debian 11 Bullseye gị.
A na-atụ aro ka ịwụnye GNOME 41 na Debian 11, enwere ike nweta nke a site na ịga na nkuzi anyị. Otu esi etinye GNOME 41 na Debian 11.
Mbụ, tupu ihe ọ bụla, melite gị Debian Sistemụ arụmọrụ iji hụ na ngwugwu niile dị adị adịla ugbu a:
Lelee nkuzi anyị ma ọ bụrụ na ị ka nọ Debian 10 ma chọọ ịkwalite na Debian 11 iji wụnye Gnome 40.
Iji wụnye ụdị Gnome kachasị ọhụrụ na sistemụ arụmọrụ Debian 11 gị, ị ga-achọ ịkwado nkwado nnwale. Nke a bụ usoro kwụ ọtọ, ozugbo emechara, ị nwere ike ịwụnye ụdị kachasị ọhụrụ nke Gnome ga-enye.
Nke mbụ, mepee ọnụ ụzọ gị (Ctrl+ALT+T), mgbe ahụ ịkwesịrị ịme ka ebe nchekwa nnwale banye isi mmalite.list dị ka ndị a:
Ị nwere ike ịdị mkpa iji su iwu iji nweta mgbọrọgwụ ma ọ bụrụ na ịtọbeghị sudoers.
Ugbu a n'ime isi mmalite.list faịlụ, tinye ahịrị ndị a:
Ugbu a, chekwaa faịlụ ahụ (CTRL+O), wee pụọ (CTRL+X).
N'ikpeazụ, melite ndepụta nchekwa gị:
Ugbu a, gaba na echichi akụkụ nke nkuzi ozugbo zuru ezu.
upgrade Gnome 40 & ndabere
Ugbu a ị nwere ebe ziri ezi iji wụnye desktọpụ Gnome kachasị ọhụrụ, jiri iwu na-esonụ na ọdụ gị ka ịmalite nrụnye:
Dịka ị na-ahụ, iwu ahụ na-eji -t nnwale iji wụnye ngwanro Gnome kachasị ọhụrụ site na ebe nchekwa nnwale ị gbakwunyere.
Ozugbo onye njikwa Gnome Session rụchara, malitegharịa sistemụ arụmọrụ Debian 11 gị:
Ozugbo ịbanyeghachiri, gosi na nkwalite ahụ aga nke ọma site na ịpị iwu na-esonụ na ọdụ gị:
Ekele, ị kwalitela na ụlọ Gnome 40 kacha ọhụrụ.
Ka imelite Gnome, naanị ihe ị ga - eme bụ ịme iwu mmelite dabara adaba dịka n'okpuru:
Dịka i tinyegoro Gnome site na ebe nchekwa nnwale, a ga-ebulite mmelite ọhụrụ ọ bụla yana mmelite ọ bụla ọzọ na ngwungwu sistemu ọkọlọtọ gị. Ọ bụrụ na mmelite dị, jiri iwu nkwalite nkịtị:
N'ime nkuzi a, ị mụtala gbasara ebe nchekwa nnwale Debian, tinye ya, na ịdọrọ desktọpụ Gnome kachasị ọhụrụ. N'ozuzu, Gnome 40 ga-adị nnọọ iche ozugbo ị gbanwere site na ndabara 38 na Debian 11 ruo 40. Ụfọdụ n'ime mgbanwe ndị a na-ahụ anya bụ akụkụ windo gburugburu, ihe ngosi dị nro nke na-enye ya ọdịdị ọgbara ọhụrụ n'etiti ọtụtụ mgbanwe ndị ọzọ.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara atụmatụ ọhụrụ, gaa na onye ọrụ gọọmentị Ibe mwepụta Gnome 40.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, GNOME Mail igodo
Otu esi etinye Tor Browser na Debian 11 Bullseye
Otu esi etinye Python 3.10 na Fedora Linux
2 echiche na "Otu esi eme nkwalite na Gnome 40 na Debian 11 Bullseye"
November 3, 2021 na 6: 31 am
N'agbanyeghị ịgbaso ntuziaka niile yana ịnwe ikike sudo, mmelite ahụ dara; sistemụ ahụ yiri ka ọ kwenyere na ụdị kachasị ọhụrụ ka na-eji Gnome 38. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi na m na-eji firmware enweghị ikike?
November 3, 2021 na 10: 25 am
Daalụ maka ozi ahụ.
Ọ dị ka ha wepụrụ ya na nnwale ahụ. Ugbu a, GNOME 41 dị na ule (bookworm) na ebe nchekwa (sid) na-akwụghị ụgwọ site na ịlele nke a taa, ọ dị m nwute ikwu. Ị nweghị ike ịwụnye GNOME 40 site na ebe nchekwa Debian ọ bụla, nke nwere ike ịbụ ihe dị mma ebe ọ nwere nnukwu ahụhụ. Fedora hụrụ nke a na ụdị ya.
https://www.linuxcapable.com/how-to-install-gnome-41-desktop-unstable-on-debian-11-bullseye/ <--- nke a na-etinye GNOME 41 kachasị ọhụrụ site na ebe nchekwa na-adịghị akwụsi ike, mana ị nwere ike dochie ebe nchekwa na-adịghị akwụ ụgwọ site na nnwale iji jide ụdị a na-ebuga na Debian 12 Bookworm, nke nwere ike bụrụ ihe na-achọsi ike karị ebe ọ ga-adịkwu mma dịka onye na-adịghị akwụsi ike. na-ahụ ngwungwu kacha ọhụrụ mgbe niile, mana enwere ike imebi karịa.